Ny vy tsy matevina indrindra eto an-tany dia 0,015 mm ihany ny hateviny: vita any Chine - China Foshan Hermes Steel
Takelaka vy vita amin'ny borosy
Takelaka vy tsy matevina
Sakan'ny Stainless Steel
Tapa-by vita amin'ny vy tsy misy fangarony
Ny vy tsy dia manify indrindra eto an-tany dia 0,015 mm ihany ny hateviny: vita any Chine
Araka ny tatitra farany avy amin'ny CCTV, ny "vy vy mandatsa-tànana" farany novokarin'i China Baowu Taiyuan Iron and Steel Group dia mahia noho ny taratasy, toy ny fitaratra ary tena mafy ny firafiny. 0,015 mm ihany ny hateviny. Ny stack ny firaka vy 7 dia gazety. hateviny.
Voalaza fa io no vy tsy matevina indrindra eto an-tany amin'izao fotoana izao, ary azo ampiasaina ho fitaovana fanodinana ao anaty puce izany amin'ny ho avy, ka antsoina koa hoe "vy vy."
Mba hanaovana an'ity karazana "vy vy" ity, ny lakile dia mitoetra ao amin'ny fandaminana sy ny fitambaran'ny rouler freins ao amin'ny turnstile. Baowu Taiyuan Iron and Steel Group dia nanao andrana 711 ary nanandrana karazan-tsarimihetsika maherin'ny 40000 nandritra ny roa taona. Taorian'ny permutations sy ny fitambarana azo atao, ny vavahady vy tsy vita varahina dia natao 0,02 mm ny hateviny, nanapotika ny ampihimamba teknolojia vahiny.
Nanomboka tamin'ny Mey tamin'ny taon-dasa, ny Taiyuan Iron sy Steel dia nanohy nanao fikarohana ara-tsiansa sy ara-teknolojia tamin'izany, ary taorian'ny fanandramana efa ho zato, dia navoakany hatramin'ny 0.015 mm ny vy vy.
Ankoatry ny fanodinana puce, ity "vy vy" ity dia azo ampiasaina ho an'ireo sensor amin'ny sehatry ny aerospace, bateria ho an'ny vokatra angovo vaovao, ary finday efijery mivalona.
Fotoana fandefasana: Aug-30-2021